Amammerԑ Ahodoↄ mu HIV ne Hepatitis Adwumakuo no ne mpↄtam a wↄwↄ amammerԑ ahodoↄ pii no ne apomuden adwumakuo a wↄwↄ NSW na ԑyԑ adwuma sԑdeԑ wↄbԑtumi ate HIV ne hepatitis a ԑnam mmoawa so ba no nsunsuansoↄ so.
Nsԑm a ԑfa HIV &hepatitis ho
Nsԑm no wↄ kasa a ԑboro 20 mu
Deԑ yԑreyԑ n’adwuma Mmoa
Yԑde kasahodoↄ ho mmoa ma wↄn a wↄwↄ HIV
Akuo ahodoↄ mu ntoabↄ ne amanneԑbↄ wↄ dawurubↄfoↄ hↄ
Apomuden ne mpↄtam adwumayԑfoↄ nimdeԑ ho mpuntuo
Apomuden ho Dawurubↄ
Mmoa ne akadeԑ ahodoↄ a ԑwↄ hↄ ma mpↄtam a ԑbi wↄ hↄ.
Sua fa sԑdeԑ yԑne mpↄtam a wↄn ho aka no nkutahodie a yԑnam so de reboa wↄn ama wↄahunu sԑdeԑ wↄn bԑhwԑ HIV ne Hepatitis a ԑnam mmoawa so ba no fa ho adeԑ.
Yԑne mpↄtam hↄfoↄ no di nkutaho wↄ akwan pii a ԑde obuo ma wↄn amammerԑ ne wↄn nneԑma a wↄn ani ku ho no so.
Kan bi ka ho
Hwehwԑ nsԑm a ԑfa kasa ahodoↄ ne apomuden mpuntuo ho akadeԑ ho na ԑmmoa wo wↄ w’adwuma a wone atukↄtenafoↄ ne wↄn a wↄabↄ wↄn ho adwaa reyԑ no.
Yԑne wo bԑtumi ayԑ adwuma de ama wo nhyehyԑeԑ a woyԑ ma amammerԑ ahodoↄ mufoↄ no akↄ kan.
Hwԑ mmoa ahodoↄ ne akadeԑ ahodoↄ a yԑde rema dawurubↄfoↄ nnansa yi no, dwumadie no ho nsԑm, nkontabuo ne nhyehyԑeԑ a ԑwↄ hↄ ma dawurubↄfoↄ wↄ amanneԑbↄ mu.
Kↄ yԑn Diversity News amanneԑbↄ no mu na fa wo ho hyԑ mu na hunu nneԑma foforↄ biara a ԑbԑba wↄ MHAHS kaseԑbↄ ahodoↄ nyinaa ho.